Iifonti eziSimahla ezi-5 (V) | Umdibaniso olungileyo wokukhuphela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uthanda iifonti, Kwaye uye woyiswa luhlobo lomlutha okukutsala ukhuphele zonke iifonti zasimahla ezininzi njengoko uhlangabezana nazo endleleni. Kodwa ngamanye amaxesha, akukho lula ukufumana iintlobo esizithandayo. I-Tranquil @, evela kwi-Intanethi kwi-Intanethi siyayiphelisa le saga yezithuba.
Njani? Ngaba awazi nto malunga nesaga enjalo? Rhoqo ngolwesiHlanu sipapasha iposti ethi iqulethe iintlobo ezintlanu zasimahla. en iposti yokuqala yesaga Ungalanda iNorwester, iSequi, iKomoda, iSTELA UT yesiqhelo kunye noFarewell; phakathi iposti yesibini awuyi kufumana nto ngaphezulu kwaye akukho nto iphantsi kwenxalenye ephindwe kabini yeposi, iifonti ezili-10, eziyi-Moonhouse, i-Moonshiner, iCoco, iKelson Sans, iMagna, iKankin, iVetka, ifonti yeSiffon, iRose kunye ne-Esqadero; phakathi Kweyesithathu uya kudibana nePorto, Iskripthi sokuDanisa, i-Innercity, iSequoia kunye neHagin Typeface kunye kwigumbi, iBiko Rhoqo, Anson, Casper, Lovelo kunye neFlex Display.
Iifonti zasimahla ezili-5
I-Plethora: I-Plethora 1984 luhlobo lochwethezo olwenziwe yi-ONO CREATES, kwaye luphawulwa zii-swirls kunye nokujija ekuphelisweni kwayo, ukuba yindawo yokubhala enobuntu obuninzi ekufuneka isetyenziswe kwizicatshulwa ezimfutshane kakhulu, ezinje ngezihloko.
Ifonti yasimahla ye-Oranienbaum: luhlobo lochwethezo olwenziwe ngabantu ababini iminyaka emibini, serif. Intle kakhulu enokusetyenziselwa kokubhaliweyo kokubhaliweyo nakwizihloko.
Corduroy. ICorduroy Slab yindawo eqinileyo yeslab-serif typeface, eyenzelwe iintloko.
Ngaphandle kweemerriweather-I-sans-serif typeface eyilwe luhlobo lweSorkin kunye nokuxhasa uninzi lweelwimi.
Agilis ukuhambelana namanye amagama: kum, uhlobo lohlobo olunobabalo. Ngobungakanani obukhulu, ijongeka njengenye ifonti ye-serif, kodwa xa ijongwa ngobukhulu obukhulu, ukungafezeki kwayo ngabom kuyabetha. Ii-angles "ezingaqhelekanga", "ukusilela" ... kum, uhlobo lohlobo lomntu. Iqulethe ii-ligature ngezibini st, ct, fi, ffi, fl, kunye neffl. Yenza iintolo ngokuzenzekelayo xa uchwetheza ->
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iifonti eziSimahla ezi-5 (I), Iifonti eziSimahla ezi-5 (x2) (II), Iifonti eziSimahla ezi-5 (III), Iifonti eziSimahla ezi-5 (IV)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti eziSimahla ezi-5 (V)
Izixhobo zemizobo ezi-7 zale Krismesi